OnePlus 8T Review : Flagship Enough?? — Anycall Mobile
By liam October 29, 20204Mins Read
ဒီနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ OnePlus 8 Series ရဲ့အောင်မြင်မှုန‌ဲ့အတူ OnePlus ကတော့ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus 8T မကြာသေးခင်ကမိတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ OnePlus 8T ဟာဆိုရင် OnePlus ရဲ့ T Series တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ High-Quality Features တွေကိုပေးနိုင်ပါ့မလား ??
အောက်က Review မှာအဖြေရှာကြည့်လိုက်ရအောင်
OnePlus 8T ရဲ့ Design ဟာဆိုရင်အရင် OnePlus ဖုန်းတွေနဲ့မတူတဲ့ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံ Camera Setup ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Camera Setup ထဲမှာတော့ LED Flash နှစ်ခုနဲ့အတူ Camera လေးလုံးကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Camera Setup ဟာ OnePlus အတွက်တော့ပုံစံအသစ်ဆိုပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတော်တော်များများမှာ ဒီလို Camera Setup မျိုးကိုပဲသုံးပေးလာတာမို့လို့ ဒီပုံစံက ကြည့်ရတာ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်မနေပါဘူး။ ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတော့ Selfie အတွက် Punch Hole တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာ သူ့ရဲ့ Punch-hole အရမ်းကြီးမနေဘဲ ခပ်သေးသေးပဲရှိတဲ့အတွက် Full View Experience ကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်မှာပါ။ ဒီလို ရှေ့ဘက် Screen ကော ကျောဘက် Design နှစ်ခုစလုံးကို Gorilla Glass နဲ့ကာကွယ်ပေးထားပြီးဘေးဘောင်‌ တွေကိုတော Aluminum Frame နဲ့ကွပ်ပေးထားပါတယ်။
Volume ခလုတ်ကိုတော့ ဖုန်းရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ညာဘက်မှာတော့ Power ခလုတ်နဲ့ Alert Slide ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Alert Slider ကနေတစ်ဆင့် Silent, Vibration ၊ Ring တို့တိုအလွယ်တကူအပိတ်အဖွင့်လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အပေါ်ထိပ်မှာတော့ Microphone ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ဖုန်းအောက်ခြေမှာတော့ Dual SIM tray ၊ USB-C port နဲ့ Microphone,နဲ့ Speaker ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ Design ကိုခြုံပြောရရင် အခု Review လုပ်နေတဲ့ Sliver အရောင်ဟာ ကြည့်ရတာ Premium ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မှန်းသိသာစေတဲ့အပြင် ပါပါလေးနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်ပါတယ်။၊ 2020 ထွက် Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ ကိုင်ရတာ အားရစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
Display မှာတော့ 6.55-inch Fluid 2.5D AMOLED display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Display Quality ကတောါ AMOLED ဆိုတဲ့အတိုင်း အ‌ရောင်တွေကစိုတယ်။ နက်သင့်တဲ့နေရာတွေနက်တယ်လို့‌ပြောလို့ရတယ်။ View Angle တွေ‌မှာလည်းဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။ ဒီလို Display မျိုးမှာ 120Hz Refresh Rate ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာမို့လို့ ဖုန်းရဲ့ Screen ဟာ တော်တော်လေး Smooth ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Display ဟာ အမြင့်ဆုံး 1,100 nits brightness အထိထောက်ပံ့ပေးထားတာမို့လို့ ဖုန်းရဲ့ Brightness ဟာ Indoor ကော Outdoor မှာကောဖုန်းကိုကြည့်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်းအရင် OnePlus 8 Pro လို 2K Resolution 3D Curved Display ကနေ OnePlus 8T မှာ Full HD+ Resolution 2.5 D Flat Display ကို Display ကို Downgrade လုပ်လိုက်တာကိုတော့ သဘောမကျပါဘူး။ 2K Resolution 3D Curved Display သာဆက်သုံးလာရင်တော့ ကျွန်တော်အဖို့ Display ကိုပိုပြီးအမှတ်ပေးမိမှာ အသေအချာပါပဲ။
Performance အတွက်တော့ Flagship ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်း Snapdragon 865 Chipset နဲ့အားဖြည့်‌ပေးထားပါတယ်။ Snapdragon 865 Chipset နဲ့ဆိုတော့ Performance ကအရမ်းကြီးပြောနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ဒီ OnePlus 8T အတွက် Snapdragon 865 Chipset ထက်ပိုမြန်တဲ့ Chipset မျိုး (ဉပမာ Snapdragon 865+ ) မျိုးကိုသုံးပေ‌းစေချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း Snapdragon 865 Chipset ဟာ သင်ဘယ်လို Graphics အမြင့်စား Apps တွေပဲသုံးသုံး Games တွေကိုပဲဆော့ဆော့ Lag တာတွေမရှိဘဲ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခု Review အလုံးမှာ RAM 8GB ပါတဲ့အတွက် Multitasking ပိုင်းမှာလည်း ချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ။ 120hz နဲ့ဆိုတော့ပိုမိုက်သွားတာပေါ့…
Gaming ပိုင်းမှာတော့ PUBG ကို အမြင့်ဆုံး Graphics Ultra HD နဲ့ Frame Rate Ultra အထိထားဆော့လို့ရပါတယ်။ တစ်ခြား Call Of Duty ၊ League Of Legends လိုမျိုး Graphics မြင့်တဲ့ဂိမ်မျိုး‌ေတွမှာလည်း Graphics အမြင့်ထားဆော့လို့ရပါတယ်။ ဒီလို Graphics အမြင့်ဆုံးထားဆော့တဲ့အခါ‌ေတွမှာ Lag တာတွေ ၊ Frame Rate ကျသွားတာတွေမဖြစ်ပါဘူး။ Graphics အရမ်းတင်ထားရင်တော့ဖုန်းကတော့ ပူလာပါတယ်။
Software ပိုင်းမှာတော့ Android 11 အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Hydrogen OS 11 နဲ့ Run ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Hydrogen OS 11 မှာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတာကတော့ Always On Display ပါပဲ။ ဒီ Always On Display မှာဆိုရင် နာရီပုံစံအသစ်တွေနဲ့ battery percentage logo ပုံအသစ်တွေပါလာပါတယ်။ ဉပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Insight Style မျိုးပေါ့။ ဒီ Insight Style မှာ
Date ၊ Time နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းသုံးတဲ့ အချိန်တွေကို အပေါ်အောက်ဒေါင်လိုက်ပြပေးထားပြီး Phone ကို Unlocks လုပ်ထားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကိုလည်းပြပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Default Style တွေကလည်းတော်တော်လေး‌သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်‌ကြိုက်ပြောင်းလို့ရမယ့် Bitmoji AOD, Canvas AOD စတဲ့ Modes တွေလည်းပါလာဖို့ရှိပါတယ်။
Software ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုံး၀အားမရတာကို ပြောရရရင်တော့ Brightness အတိုးအချဲ့လုပ်ရတာပါပဲ။ လက်ရှိ‌သုံးနေတဲ့ Brightness ကနေတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် လျော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်တဲ့အခါ Brightness က ချက်ချက်တိုး/လျော့မသွားဘဲ ခဏကြာမှသာ Brightness က တိုး/လျော့ လာပါတယ်။ ဒီလို Delay ဖြစ်နေတာက တော်တော့်ကိုအဆင်မပြေတာပါ။ နောက် Update တွေမှာတော့ OnePlus ဘက်ကနေ Fix ပေးဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ တစ်ခြား Software ရဲ့ Animations တွေကတော့ တော်တော်လေး Smooth ဖြစ်ပါတယ်။
ခြုံပြောရရင် Hydrogen OS ဟာ တရုတ် Apps တွေပါနေတာကလွဲပြီး Features အစုံနဲ့ သုံးရတာကြည့်လို့‌ေကာင်းပြီး တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ။ Hydrogen OS ကနေ Oxygen OS 11 ကိုပြောင်လိုက်ရင်တော့ ပိုကြည့်လို့ကောင်းသွားမှာအသေအချာပါပဲ။
Cameras အတွက်တော့ OnePlus 8T မှာ Flagship Camera Setup လို့ပြောလို့ရတဲ့ Quad Cameras ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Quad Camera ထဲမှာ 48MP Sony IMX586 Main-camera sensor ၊ 16MP wide-angle camera ၊ 5MP Macro camera နဲ့ 2MP Monochrome camera ပါဝင်ထားပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ OnePlus 8 Pro မှာပါခဲ့တဲ့ Telephoto Camera တော့ပါမလာတော့ပါဘူး။
ဆိုတော့ Camera Performance ဘယ်လိုရှိလဲ?? ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
ဖုန်းရဲ့ 48MP Main- sensor ဟာအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အခြေအနေမှာ Focus မြန်မြန်နဲ့ ပုံတွေကိုရိုက်ပေးနိုင်တယ်။ Focus မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံတွေကို လည်းခပ်မြန်မြန်နဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ပုံတွေကလည်း Over Saturated ဖြစ်မနေဘဲ Contrast ကောင်းကောင်းနဲ့ Natrual ဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်။
Low Light မှာတော့ ရိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကကြည့်လို့ Detail တွေ အရောင်တွေမှာ ကြည့်လို့ကောင်းနေပေမယ့်လည်း Noise တွေထတာကိုတော့တွေ့နေရသေးပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ OnePlus ကနေ Nightscapse Mode ကို Update ကနေပြင်ပေးပြီး Noise တွေမထလာအောင်လုပ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။
Telephoto Lens မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းဟာ Zoom ကိုအရမ်းဆွဲလို့မရပေမယ့် 10x Digital Zoom ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမှာ Zoom လုပ်ရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖုန်းရဲ့ Macro Camera ဟာလည်း အနီးကပ်ပုံတွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Camera လို့ပြောရမယ့် 2MP Monochrome Camera ကလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ပဲ အဖြူအမဲ ပုံတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Result ရအောင်ရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Video ပိုင်းမှာတော့ 4K video တွေကို 30fps နဲ့ရိုက်နိုင်တဲ့အပြင် 60fps နဲ့အထိပါရိုက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် FHD+ 240fps Videos တွေနဲ့ 720p Super slow motion တွေကိုလည်းရိုက်ပေးနိုင်သေးတယ်။ Video Quality ကတော့ optical image stabilization ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ် Videos ကိုပဲရိုက်ရိုက် Smooth ဖြစ်နေမှာပါ။
Selfie အတွက် 16MP front-facing camera ဟာ ပုံမှန် Selfies တွေရိုက်တာတွေ နဲ့ Videos ရိုက်တာတွေမှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီ Selfie ဟာထူးခြားခြားကြီးတော့ကောင်းမနေပါဘူး
Camera ကိုခြုံပြောရရင် Camera ဦးစားပေးဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ OnePlus 8T ကအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်ပုံတွေလောက်ပဲရိုက်ဖို့လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။
OnePlus 8T ရဲ့ Battery မှာတော့ OnePlus 8 ထက်ပိုများတဲ့ 4,500mAh Battery ပါလာပါတယ်။ Battery မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာကတော့ OnePlus ဖုန်းတွေထဲမှာ အမြန်ဆုံး Fast Charging လို့ပြောလို့ရတဲ့ 65W Wrap Charge ပါလာတာပါတယ်။ ဒီ 65W ဟာ OnePlus ကနေကြော်ညာထားတဲ့ 100% ကို 39 မိနစ်ဆိုတဲ့အတိုင်း 0% ကနေ 100 % ကို 40 မိနစ်လောက်ပဲသွင်းရပါတယ်။
Battery Life ကတော့ ဂိမ်းတွေဆော့တာအပါအဝင် တစ်ခြား Facebook ၊ YouTube ၊ TikTok တို့ကို တစ်နေကုန်သုံးတာတောင် ညဉ့်နက်ပိုင်းမှာအားက 20% အထိကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Flagship ဖုန်းတွေမှာတွေ့နေရတဲ့Wireless Charging တော့ပါမလာတော့ပါဘူး… Wireless Charging သာပါလာရင်တော့ ကျွန်တော်အဖို့ Charging ပိုင်းကိုပိုသဘောကျမိမှာပါ။
ဆိုတော့ ဒီ OnePlus 8T ဟာဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ?
ဒီ Review ကိုကြည့်နေတဲ့ သူဟာ Premium Design ၊ Display ကောင်းကောင်း ၊ Performance ကောင်းကောင်း၊ Battery ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ OnePlus 8T ဟာ သင့်အတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမှာပါ။ Camera အကောင်းဆုံး နဲ့ Wireless Charging ကိုမှရှာနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ OnePlus 8T ကသင့်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။….
အကုန်အချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် ..OnePlus 8T ရဲ့ Flagship-level performance ၊ 120hz 1080P display ၊ 65W Fast Charging ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Design နဲ့ အသင့်တင့် Camera Performance တွေကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေး ၇ သိန်းဝန်းကျင်ကတော်တော်လေးတန်နေပြီလို့ပြောရင်း ဒီ Review လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်….
ကဲဖုန်းအပေါ်အမြင်လေးတွေကို Comments မှာဝင်ရောက်ဆွေးကြပါဦးခင်ဗျာ..